Shiinaha aluminium warshad PANEL oo ay ka kooban tahay iyo Alucosun
ALUMINUM PANEL COMPOSITE PANEL (Wajiga hore ee derbiga)
ALUMINUM PANEL KA DUWAN
Iyadoo la horumarinayo tiknoolajiyada asaasiga ah, Alucosun FR ayaa loo sameeyay shuruudo adag oo ah xeerarka dib u dhigista ee alaabta dhismaha. Alucosun FR waxaa ka codsaday naqshadaha adduunka iyo milkiilayaasha dhismayaasha kaliya maahan dhismaheeda heer sare sida feejignaan la'aan, qallafsanaan sare laakiin qaab karti aad u fiican, laakiin sidoo kale, tan ugu muhiimsan, waxqabadkeeda cajiibka ah ee ﬁ dib-u-caddaynta faa'iidada leh ee macdanta xudunta
Midabbo badan oo midabbo leh oo leh muuqaal ballaadhan oo midabbo caadi ah iyo midabbo u gaar ah, oo ay weheliyaan cows iyo naylal dhalaalaya muraayad oo la caday sidoo kale Alucosun waa soo saaraha ugu horeeya ee bixiya tabeelooyin balaaran (2000mm) wuxuu taageeraa daabacaadda qaab ballaaran.
FILIMKA FADHIGA FUDUD
Filin Badbaadinta Fudud ee Fudud oo si fudud looga saari karo markasta oo aad isticmaasho. Dusha sare ee guddiga ma qaban doono wax calaacal ah marka la joojiyo nidaamka ka saarista. Nafaqada Filimka kama leexaneyso waqtiga kadib natiijooyinka waxay keeneysaa kordhinta-nolosha Alucosun Sign ®.
HABKA QA AAD LAGU AAMINI KARO
Nidaamka QA oo si fiican u dhisan oo la diiwaangeliyey ayaa hubinaya tayada badeecada aan geyno. Waxaa lagu gaadhay iyadoo si dhammaystiran loo isku darayo Sheybaarka buuxa iyo shaqaale xirfad leh. Dufcad kasta oo wax soo saar ah waxaa lagu tijaabiyaa waqti kala-go'an oo joogto ah warbixinnada waxaa lagu keydiyaa meel ammaan ah si loola socdo mustaqbalka.
WAQTIGA HOGAAMIN SHORT
Waxaan la shaqeyneynaa saacad kasta saacado badan oo ah alaabta ceyriinka si loo caddeeyo noocyo kala duwan si aan ugu adeegno macaamiisheenna adduunka oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan si istiraatiiji ah ugu dhaweynaa ilaha taas oo noo suurta gelineysa inaan sidoo kale sameyno badeecooyin qaas ah, waxay naga dhigeysaa waqtigeena hoggaanka inuu ka gaaban yahay soo saarayaasha kale ee badan.
Waxaan gacan weyn ka geysanay soo-saarista calaamadaha iyadoo aan soo saarnay wax soo saar cusub. Qeybteena R&D ee la shaqeysa xarunta wax soosaarka PPG si loo soo saaro rinji gaar ah oo loo yaqaan 'PE' kaasoo la jaan qaadi kara dhammaan noocyada makiinadaha Daabacaadda Dijital ah. Dhanka kale, waxaan si adag uga shaqeyneynaa soo saarista wax soo saar cusub oo fudeyd badan oo saftey u ah macaamiisheenna.
Calaamadda Alucosun®aluminium guddi isku dhafan waxay ka kooban yihiin laba aluminium oo aluminium ah iyo xudunta polyetylen kuwaas oo lagu dhejiyay geedi socodka socda ee leh heerkulka sare.
Shayga Range Cabbirka Jaangooyada
Dhumucdiisuna Panel (mm) 2-8mm 2mm, 3mm, 4mm, 6mm
Aluminium Maqaar Aluminium (mm) 0.1-0.5mm 0.12mm, 0.15mm, 0.21mm, 0.3mm
Ballaaran 1000-2000mm 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm
Dhererka ≥1000mm 2440mm, 3050mm, 3660mm, 4050mm
Dulqaadka Dhinacyada leh
Dhumucdiisuna (mm) -0 + 0,2
Ballaaran (mm) . 2
Dhererka (mm) . 3
Diagonal (mm) . 5
Qaansada ugu badnaan (mm) .5
Isku-dhicnaanta ugu Badan (mm) .5
Rinjiga Rinjiga (micron) 18-20µm
Qalinkii Qalalan 2H
Adag Dahaarka 2T
Iska caabinta heerkulka -40 ℃ ~ + 80 ℃
Awoodda Saameynta (Kg / cm2) 50kg / cm2
U Adkaysiga Biyaha 2 saac, wax isbeddel ah ma jiro
Caabbinta Acid 5% HCL, 24 saacadood isbadal maleh
Cadaadiska Alkali 5% NaOH, 24 saacadood isbadal malaha
Iska caabinta saliida 20 # saliida mishiinka, isbadal malahan
Iska caabinta xallinta 200 jeer by MEK
Nadaafadda Nadaafadda Times 1000 jeer isbadal la'aan
Xoog Diirka 180 ° New 5 Newton / mm
Nooca Daaha AA3003 / AA1100
Nidaamka Rinjiga / Habka / Spec Polyester / Coil Coating / AAMA
Shahaadada Matte 20% -40%
Loss Gudbinta Codka (dB) 23-25
Qiimaha R (MK / W) 0.0045 0.0078 0.0110
U Qiimaha (W / MK) 5.7 5.6 5.5
Ballaarinta kuleylka hawada 2.4 mm / m @ 100 kiilomitir kasta
Calaamadda Alucosun ®baararka ayaa loo adeegsadaa codsiyo kala duwan oo dadku la kulmaan nolol maalmeedka. Waa wax soo saar waxtar leh oo dhinacyo badan leh oo ku saabsan calaamadaha iyo warshadaha xayeysiinta ee loogu talagalay abuurista cajiibka ah.
SAXIIX SAMEYNTA IYO DUKAANKA DUKAANKA
Waad ku mahadsan tahay dabacsanaanta iyo qaab dhismeedka Alucosun Sign ®PE, waxay si aad ah isugu habboon tahay soo saarista calaamadaha, bandhigyada, goobaha bandhigyada, iwm.
Calaamadda Alucosun® PE, PPG rinjiyeyn la hubo, oo leh midabbo kala duwan iyo xulashooyin dhalaalaya, ayaa siinaya xalka ugu habboon ee qurxinta gudaha.
LED / UV DIGITAL daabacaadda
Calaamadda Alucosun ®waxay bixisaa UV daabacaadda dhijitaalka ah iyo daabacaadda LED-ka. Waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan noocyada mashiinnada daabacaadda, dusha sare ee guddiga sidoo kale awood u leh daabacaadda dhijitaalka ah ee LED-ka. Xaqiiqdii, tiknoolajiyada daabacaadda LED waxay badbaadin kartaa tamarta 50%. Qiimaha iftiinka LED wuxuu isticmaali karaa 4000 saacadood, sidoo kale bey'ad ahaan, xasilooni, hawlgal fudud. Waa inuu noqdaa isbeddelka warshadaha daabacaadda.
Dhammaan Calaamadaha Alucosun® dhammaystirku wuxuu imanayaa 5 sano oo dammaanad ah oo loogu talagalay isticmaalka dibedda. Burushka iyo muraayadaha dhammaadka leh nidaamyo kala duwan looma balan qaadayo dalab dibedda ah oo loogu talagalay dammaanad midab sax ah si naxariis leh nala soo xiriir si faahfaahsan.
Laga soo bilaabo bilowgii, Alucosun Sign ®waxay had iyo jeer indhaha ku haysay jidka oo dhan, laga bilaabo korsashada alaabta ceeriin ilaa alaabada dhamaadka, kuwaas oo dhammaantood lagu fuliyay nidaamka xakamaynta tayada - oo si dhammaystiran uga kooban kormeerayaal xirfadlayaal ah iyo qalab shaybaar oo horumarsan, iyagoo hubinaya in dhammaan alaabooyinka la soo saaray. si waafaqsan heerarka caalamiga ah.
Calaamadda Alucosun ®kooxda waxaa ka go'an inay taageerto macaamiisheena iyadoo la siinayo waqtiga la keenayo alaabooyin la isku halleyn karo iyo adeegyo qiimo gaar ah leh. Dhammaan arrimahan ayaa kaa caawin kara helitaanka faa'iidada tartanka suuqaaga. Waxaan hiigsaneynaa inaan sii wadno himiladeena iyo himiladeena annagoo si joogto ah u raadinayna horumarin iyo horumar iyadoo la adeegsanayo waxbarasho iyo waxbarasho joogto ah.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad dhigatid badeecadeena baaritaanka, waxaad heli doontaa wax kabadan intaad filaysey!
Kaliya maahan kartida laakiin sidoo kale waxay go'aamisaa oraltitude.
Hore: Aluminium dahaarka dahaarka
Xiga: Alucosun FR A2
4mm Aluminium Aluminium Guddi
Alucobond Aluminium Iskuduwaha Aluminium
Guddiyada Isku-darka Aluminium
Pvdf Aluminium Iskuduwaha Aluminium